OpinionLab waa goob loogu talagalay in lagu soo qabto macluumaadka macaamiisha iyada oo loo marayo sahan iyo jawaab celinta boggaaga. OpinionLab waxay ugu yeertaa Macluumaadka Voice-Of-Customer (VOC). OpinionLab hadda wey balaarineysaa aaladda ay ku shaqeyneyso si loogu daro labadaba isdhexgalka falanqaynta iyo tijaabinta. This is extremely helpful to correlate your visitors' feedback with their site activities.
Tusaale ahaan, haddii Analytics data reveals a sudden spike in page bounce rate, you can integrate customer-comment reports to learn why people are leaving. Or, if you receive an alert indicating that many page visitors are making negative comments, you can click once to view each user's Analytics xogta ama ciyaarta loo maqli karo.
Tags: sahaminta macaamiishashaybaarka ra'yigaopinionlabxogta codkacodka macmiilka